Ophthalmoxerosis (မျက်ရည်ခမ်းခြောက်ခြင်း) - Hello Sayarwon
HelloSayarwon » ကျန်းမာရေး အခြေအနေများ » ကျန်းမာရေးအားလုံး » ကျန်းမာရေးအခြေအနေများ » Ophthalmoxerosis (မျက်ရည်ခမ်းခြောက်ခြင်း)
Ophthalmoxerosis (မျက်ရည်ခမ်းခြောက်ခြင်း) ကဘာလဲ။
မျက်လုံးခြောက်ခြင်းသည် မျက်ရည်များမှ မျက်လုံးအတွက် လုံလောက်သည့်ချောဆီအဖြစ် မဆောင်ရွက်နိုင်သည့် အခြေအနေကို ခေါ်ပါသည်။ မျက်ရည်လွှာမကောင်းတော့ခြင်းကြောင့် မျက်လုံးတွင် မအီမသာခံစားရမှု အမြင်အာရုံမကောင်းမှုတို့ဖြင့် သတ်မှတ်နိုင်သည်။
Ophthalmoxerosis (မျက်ရည်ခမ်းခြောက်ခြင်း) က ဘယ်လောက်အဖြစ်များသလဲ
ဒီရောဂါသည် အလွန်အဖြစ်များ၏။ အထူအသဖြင့် အသက် ၄၀ အထက်တွင် အဖြစ်များသည်။ အမျိုးသားများထက် အမျိုးသမီးများတွင် ပိုအဖြစ်များ၏။ ရောဂါဖြစ်ပွားနိုင်သောအချက်အလက်များကို လျှော့ချခြင်းအားဖြင့် စီမံနိုင်ပါသည်။ အချက်အလက်များထပ်မံသိရှိဖို့အတွက် ဆရာဝန်နှင့် တိုင်ပင်ဆွေးနွေးသင့်ပါသည်။
Ophthalmoxerosis (မျက်ရည်ခမ်းခြောက်ခြင်း) ရဲ့လက္ခဏာတွေကဘာတွေလဲ
မျက်ရည်ခမ်းခြောက်ခြင်း ၏ အဖြစ်အများဆုံးရောဂါလက္ခဏာများမှာ-
ခြောက်သွေ့ခြင်း၊ စူးအောင့်ခြင်း၊ ပူခြင်း သို့မဟုတ် ယားယံခြင်းများ မျက်လုံးတွင် ခံစားရခြင်း
မျက်လုံးအတွင်းနှင့် တစ်ဝိုက်တွင် အကျိအချွဲများ ထွက်ခြင်း
မျက်လုံးတွင်း အမှုန်ဝင်နေသလို ခံစားရခြင်း
မျက်ရည်ဝဲခြင်း ၎င်းသည် မျက်လုံးခြောက်ခြင်းအား ခန္ဓါကိုယ်မှ တုန့်ပြန်ခြင်းတစ်မျိုး ဖြစ်သည်။
ပူပြင်းပြီး လေတိုက်သည့်ဒေသများ အပူချိန်မြင့်ပြီး စိုထိုင်းမှုနည်းသည့် ဒေသများတွင် အဆိုပါက လက္ခဏာများသည် ပိုဆိုးဝါးနိုင်၏။
သင့်ဆီမှာ အထက်ဖော်ပြပါ ရောဂါလက္ခဏာတွေထဲမှ တစ်ခုခုများရှိနေမယ်ဆိုလျှင် သို့မဟုတ် မေးခွန်းတစ်ခုခုရှိနေမယ်ဆိုလျှင် ဆရာဝန်နှင့်တိုင်ပင်ဆွေးနွေးပါ။
Ophthalmoxerosis (မျက်ရည်ခမ်းခြောက်ခြင်း) ကိုဘာတွေကဖြစ်စေသလဲ
ရေ၊ အဆီနှင့် အကျိအချွဲများဖြင့် ပေါင်းစပ်ထားသည့် သင့်မျက်ရည်သည် မျက်လုံး၏မျက်နှာပြင်ချောမွတ် သန့်ရှင်းစေရန်နှင့် ပိုးကူးစက်မှုမရှိစေရန် ကာကွယ်ပေး၏။ မျက်လုံးခြောက်သွေ့ခြင်းသည့် မျက်ရည်မလုံလောက်ခြင်းကြောင့် ဖြစ်ရခြင်းပင်။
မျက်ရည်ခမ်းခြင်းသည် မျက်ရည်မထုတ်နိုင်ခြင်း သို့မဟုတ် မျက်ရည်လွှာတွင် အငွေ့ပျံမှု များခြင်းကြောင့် ဖြစ်ရပါသည်။ ထို့ကြောင့် မျက်လုံးခြောက်သွေ့ခြင်းအား အုပ်စုနှစ်ခုခွဲနိုင်၏။
မျက်ရည်အထုတ်နည်းခြင်းနှင့် အငွေ့ပျံမှုများခြင်းဟု ခွဲနိုင်ပါသည်။ အုပ်စုနှစ်စုလုံးတွင် မျက်ရည်လွှာ၏ hyperosmolarity နှင့် နောက်ဆက်တွဲ မျက်လုံးမျက်နှာပြင်ရောင်ခြင်းတို့သည် မျက်လုံးခြောက်သွေ့ခြင်းနှင့်ဆိုင်သော လက္ခဏာအမျိုးမျိုးကို ဖြစ်ပွားစေနိုင်ပါသည်။
ရောဂါများ – ဆီးချို၊ လေဖက်နာနှင့်တူသော အဆစ်အမြစ်ရောင်ခြင်း၊ လူးပတ်၊ စကာလရိုဒါမား၊ Sjogren’s syndrome, သိုင်းရွိုက်ရောဂါများနှင့် ဗီတာမင်အေ ချို့တဲ့ခြင်း၊ တစ်ချို့သောဆေးများ (antihistamines, decongestants, ဟော်မုန်းအစားထိုး ကုထုံးများ၊ စိတ်ကျရောဂါပျောက်ဆေးများ…)
လေဆာဖြင့်မျက်လုံးခွဲစိတ်ခြင်း။ ဒီကုသမှုသည် ခဏတာ မျက်လုံးခြောက်သွေ့ခြင်းကို ဖြစ်စေနိုင်သည်။
ရောင်ရမ်းခြင်း သို့ ဓါတ်ရောင်ခြည်ထိခြင်းကြောင့် မျက်ရည်ထုတ်ဂလင်းပျက်စီးခြင်း
မျက်တောင် သိပ်မခတ်ခြင်း ဥပမာ အချိန် အတော်ကြာအောင် စာဖတ်စဉ်၊ ကားမောင်းစဉ် သို့မဟုတ် ကွန်ပျူတာသုံးစဉ်
မျက်ကပ်မှန် အတော်ကြာအောင် တပ်ထားခြင်း
Ophthalmoxerosis (မျက်ရည်ခမ်းခြောက်ခြင်း) ဖြစ်နိုင်ခြေကိုဘာတွေက မြင့်တက်စေသလဲ
မျက်ရည်ခမ်းခြောက်ခြင်း ဖြစ်ပွားနိုင်ချေကိုမြင့်စေသော အကြောင်းရင်းများစွာရှိပါသည်။ ဥပမာအားဖြင့်
အသက်အရွယ်ကြီးခြင်း – အသက်ကြီးသည့်အခါ မျက်ရည်ထုတ်လုပ်မှု မရှိတော့သလောက် ဖြစ်နိုင်သည်။
အမျိုးသမီးဖြစ်ခြင်း – မျက်ရည်ခြောက်ခြင်းသည် အမျိုးသမီးများတွင် ပိုအဖြစ်များပြီး အထူးသဖြင့် ကိုယ်ဝန်ဆောင်စဉ်၊ သွေးဆုံးစဉ်၊ တားဆေးများသုံးလျှင် ဟော်မုန်းများ ပြောင်းလဲခြင်းရှိပါက အဖြစ်များသည်။
အလုပ်အကိုင်နှင့် ပတ်ဝန်းကျင် အခြေအနေများတွင် စိုထိုင်းမှုနည်းခြင်း၊ အပူချိန်များခြင်း၊ လေနှင့်အထိများခြင်း၊ လေထုညစ်ညမ်းမှုများ ရှိခြင်း။
ရောဂါများဖြစ်သော ဗီတာမင်အေချို့တဲ့ခြင်း၊ အသည်းရောင် စီပိုးရှိခြင်း၊ Sjogren’s syndrome, ဆီးချို။
ဆေးများ – ကင်ဆာဆေးများ၊ ဆီးဆေးများ၊ စိတ်ကျရောဂါကုဆေးများ၊ antihistamines များနှင့် beta-adrenergic blocker များလို တစ်ချို့ဆေးများသည် ဘေးထွက်ဆိုးကျိုးအနေဖြင့် မျက်လုံးခြောက်သွေ့ခြင်း ဖြစ်နိုင်ပါသည်။
ဗီတာမင်အေနည်းသောအစားအစာများ သို့မဟုတ် အိုမီဂါ ၃ အဆီဓါတ်နည်းသော အစာများ စားခြင်း
Ophthalmoxerosis (မျက်ရည်ခမ်းခြောက်ခြင်း) ကို ဘယ်လိုအတည်ပြုပါသလဲ
မျက်လုံးခြောက်ခြင်း၏ ပြင်းထန်မှုကို သတ်မှတ်နိုင်သော တိကျသည့်စစ်ဆေးမှုဆိုပြီး တစ်ခုတည်းမရှိပါ။ အောက်ပါစစ်ဆေးမှုများကိုတော့ ဖြစ်ရသည့်အကြောင်းရင်းများကို ဆုံးဖြတ်ရာတွင် အသုံးပြုနိုင်သည်။
နားလည်တတ်ကျွမ်းစွာဖြင့် မျက်လုံးစစ်ဆေးခြင်း – လူနာလက္ခဏာများကို စမ်းသပ်ရုံဖြင့် မျက်လုံးခြောက်သွေ့ခြင်းအား သိနိုင်ပါသည်။ ပြည့်စုံသော စမ်းသပ်မှုတွင် ရောဂါဖြစ်ကြောင်း သိစေနိုင်သည့် အချက်များဖြစ်သည် မျက်ရည်ယိုခြင်း၊ blepharitis, မျက်တောင်အခတ်နည်းခြင်း၊ အမြင်အာရုံ မကောင်းခြင်းတို့ကို တွေ့ရနိုင်သည်။
Schimer’s test – မျက်လုံးတစ်လုံးစီမှ မျက်ရည်ထုတ်သည့်ပမာဏကို သတ်မှတ်ရန်အတွက် သုံးသော စစ်ဆေးမှုတစ်ခုဖြစ်သည်။ ၅ မိနစ်အတွင်း ထွက်သော မျက်ရည်အား မီလီမီတာဖြင့် တိုင်းတာခြင်းဖြစ်သည်။
မျက်ရည်အရည်အသွေးအားဆုံးဖြတ်ခြင်း – တစ်ချို့စစ်ဆေးမှုများတွင် အထူးဆိုးဆေးများပါသည့် မျက်စဉ်များကိုသုံးကာ မျက်လုံးမျက်နှာပြင်အခြေအနေအား ဆုံးဖြတ်နိုင်သည်။
Ophthalmoxerosis (မျက်ရည်ခမ်းခြောက်ခြင်း) ကို ဘယ်လိုကုသပါသလဲ
မျက်လုံးခြောက်သွေ့မှုအား ကုသခြင်းသည် မျက်ရည်ထွက်နှုန်းများစေရန်၊ မျက်ရည်အငွေ့ပျံနှုန်းနည်းစေရန်နှင့် မျက်ရည်ပြန်စုပ်ခြင်းကိုလျော့ကျစေရန်တို့အား ဦးတည်ရသည်။
သာမာန် မျက်လုံးခြောက်သွေ့သောလူနာ အများစုအား OTC မျက်စဉ်းများ (မျက်ရည်တု) မှန်မှန်သုံးပြီး ကုသနိုင်သည်။ မျက်ရည်တုများကို မျက်လုံးခြောက်သွေ့ရောဂါရှိသည့်လူနာတွင် ထိခိုက်စေသည့်လက္ခဏာများ သက်သာလာစေရန် ပထမဆုံးသုံးရမည်ဖြစ်သည်။
မျက်ရည်တုတွင် ပျစ်ခဲနှုန်းအားထိန်းရန် ဆဲလူးလို့စ်များပါ၏။ ပျံ့နှံ့စေသည့် ပစ္စည်းများ (polyethylene glycol or polyvinyl alcohol) သည် အငွေ့ပျံမှုအား ကာကွယ်ပေးနိုင်ပြီး ပိုးထိတွေ့မှုမှကာကွယ်ရန် preservative များလဲ ပါ၏။
မျက်လုံးခြောက်သွေ့မှုများ အထောက်အကူပြုနိုင်သည့် ဆေးတစ်ချို့မှာ –
Cyclosporine လိမ်းဆေး – cyclosporine လိမ်းဆေးသည် ခုခံအားကိုဖိနှိပ်သောဆေးဖြစ်ပြီး နှိုင်းယှဉ်ပါက စိတ်ချရခြင်း၊ ဘေးထွက်ဆိုးကျိုးဒဏ်နည်းခြင်းနှင့် တစ်ချို့လူများတွင် သိသိသာသာ မျက်လုံးခြောက်သွေ့မှု လက္ခဏာများ လျော့ကျမှုရှိခြင်းတို့ တွေ့ရှိရပါသည်။
Glucocorticoid မျက်စဉ်း – glucocorticoid မျက်စဉ်း ပမာဏအနည်းငယ်သုံးခြင်းသည် မျက်လုံးခြောက်သွေ့မှု လက္ခဏာများအား သက်သာစေပြီး ရေတိုကုသမှုတွင် အသုံးဝင်သည်။ Corticosteroid မျက်စဉ်းများကို အများအပြားသုံးလျှင် ဘေးထွက်ဆိုးကျိုး များစေပါသည်။
မျက်ရည်ထွက်ရန်လှုံစော်ခြင်း – cholinergic များဟုခေါ်သည့် ဆေးများ (pilocarpine, cevimeline) တို့သည် မျက်ရည်ထွက်မှုကို အားပေးနိုင်သည်။ သို့သော် တခြားစနစ်လိုက်ထိသော ဘေးထွက်ဆိုးကျိုးများ ရှိနိုင်ပါသည်။
ဗီတာမင်အေ – ဗီတာမင်အေမျက်စဉ်းများသည် မျက်လုံးခြောက်သွေ့မှုလက္ခဏာများကို သက်သာစေပါသည်။
တခြားကုထုံးများသည်လည်း အသုံးဝင်နိုင်ပါသည် – ခွဲစိတ်ခြင်း၊ အထူးပြုလုပ်ထားသော မျက်ကပ်မှန်တပ်ခြင်း၊ အလင်းကုထုံးနှင့် မျက်ခွံနှိပ်နယ်ခြင်း။
လူနေမှုပုံစံပြောင်းလဲခြင်းနဲ့ အိမ်သုံးကုထုံးတွေအသုံးပြုခြင်းက မျက်ရည်ခမ်းခြောက်ခြင်း ကို ကုသရာမှာ ဘယ်လိုအထောက်အကူပြုနိုင်မလဲ။
အောက်ဖော်ပြပါ လူနေမှုပုံစံများနှင့်အိမ်သုံးကုထုံးများက သင့်အနေဖြင့် မျက်ရည်ခမ်းခြောက်ခြင်း ကိုကုသတဲ့နေရာနှင့် လိုက်လျောညီထွေဖြစ်အောင်နေသောနေရာများတွင် အကူအညီပေးနိုင်ပါသည်။
Humidifier များသည် လူနာအချိန်အတော်ကြာ နေတတ်သည့်နေရာများတွင် အသုံးဝင်ပါသည်။
မျက်လုံးအား လေမှုတ်မိခြင်း ဥပမာ ဆံပင်လေမှုန်စက်များ၊ ပန်ကာများ၊ လေအေးပေးစက်များ နှင့် တိုက်ရိုက်လေမှုတ်ခံခြင်းကို ရှောင်ပါ။
မကြာခဏ မျက်တောင်ခတ်ပါ။ အထူးသဖြင့် အချိန်အတော်ကြာလုပ်သည့် အလုပ်များဖြစ်သော စာဖတ်စဉ် ကွန်ပြူတာသုံးစဉ်။
ဆေးလိပ်သောက်ခြင်းကို ရပ်ပါ။ မီးခိုးများရှောင်ပါ။
Dry eyes. http://www.mayoclinic.org/diseases-conditions/dry-eyes/basics/definition/con-20024129 Accessed December 20, 2016
Dry eyes. http://www.medicinenet.com/dry_eyes/page6.htm Accessed December 20, 2016
Dry eye syndrome. http://emedicine.medscape.com/article/1210417-overview Accessed December 20, 2016